Ukuba nosapho lwam oyintanda kunye nabahlobo | Apg29
Musa ukukholwa weza singabasemzini basisa. Ayiyonyani.
It ujikeleza "washiya iileta" USA. Ileta ukuthumela abo babathandayo abangengabo amaKristu ukuze bakwazi ukufumana ulwazi kwiintsuku ezizayo xa ayobe kunokwenzeka. Ndafumana le ncwadi evela umfundi oye iguqulelwe Swedish yaye ndiya kuvakalisa apha.
Ukuba nosapho lwam oyintanda kunye nabahlobo.
Ulwazi I ozithumelayo malunga ayobe nebandla mna ndiyakholwa yonke igalelekile intliziyo yam.
13 Ke andithandi, bazalwana, andithandi ukuba ningazi malunga nabo abalele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba.
15 Kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi leNkosi ukuthi, thina babudlayo ubomi, esahleliyo ekufikeni kweNkosi, akukho nto kufuneka eze phambi yabalele ukufa.
16 Ngokuba iNkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini inendanduluko elinegunya, ngezwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, kwaye eyokuqala i abafele kuKristu bavuke.
17 Emva koko thina babudlayo ubomi, basaseleyo, sixwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni. Kwaye ke sisoloko uya kuba kunye neNkosi.
18. Ngoko ke khuthazanani ngala mazwi.
Xa ngesiquphe, 1/40 of a yesibini, abo baye kwiNgxowa ubomi babo baza bafumana uYesu Kristu uyiNkosi noMsindisi iya shwaka kweli hlabathi, yaye oku kuya kwenzeka ngalo naliphi na ixesha. Unokwazi njani ukuba uqinisekile ukuba usindisiwe?
10 Kuba ukholo intliziyo nobulungisa; avume ke ngomlomo uya kusindiswa.
Ukuya ecaweni, nimkhonze, wenze okulungileyo akuyi kumsindisa na. Wena lungagcineki ngemisebenzi emihle, ukuba zigcinwa for imisebenzi elungileyo. Ukuze abe 'umntu olungileyo "akakusindisi. Wena Kufuneka ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho. Kukho izibhalo ezininzi kulo. Abaninzi kuni sivile malunga ayobe "uXwilo 'yaye bambi bade bacinga okanye wathi," Ukuba kuyenzeka Ndiya baguquke babuyele kuKristu ngokuba ".
Makhe ndikubalisele ngezinto eziza kwenzeka kwixesha kufutshane kakhulu kwixesha elizayo. Nangona iBhayibhile ithi ukuba ningayazi imini okanye ilixa, kucacile ukuba siqaphele ixesha kwaye kwi imizuzu yokugcina ekupheleni kwezi imihla. Kungekudala, kholwa sibanjwe "elixwiliweyo".
Cinga, ukuba uyathanda, ukuba izigidi okanye nkqu-gidi zabantu shwaka ebusweni bomhlaba. iingozi-moya, iingozi zeemoto, bonke abafazi abakhulelweyo akusekho abakhulelweyo kuba abantwana babo olungekazalwa ukuba xhwi sisiphithiphithi kangaka.
Xa oku kusenzeka, uyazi ukuba i "ayobe" sele yenzekile kwaye ngasemva. Musa ukukholwa weza singabasemzini basisa. Ayiyonyani.
Kodwa kusekho ithemba. Okokuqala ... Musa ukuthatha nasiphi na isaziso naluphi na uhlobo lwalo ebunzi okanye esandleni kungakhathaliseki ukuba yintoni. Ukuba wenjenjalo, aninako ukusindiswa kwaye balahleke ngonaphakade.
Ngoku izinto ziya kumka. Umchasi uya kufika eqongeni kunye bezenza abalungileyo ngokunceda ukwenza yonke into elungileyo kwakhona. Uya ukuqinisekisa isivumelwano uxolo namaSirayeli, yaye apho kuya kubakho uxolo emhlabeni ixesha elifutshane. Kuya kuba inkohliso enkulu iminyaka emithathu enesiqingatha ngaphambi kwembandezelo enkulu yeminyaka emithathu enesiqingatha. Yonke iminyaka esixhenxe imbandezelo ... eziya kuba ezimbi.
Anikezele ubomi bakho kuYesu Kristu ngoku. Bamamkela njengeNkosi noMsindisi wakho. Oku ithemba lakho kuphela. Ngelishwa, uya mhlawumbi ikhanda ukuba akubambe, kodwa kufuneka uyala uthabathe uphawu lwerhamncwa, okanye nantoni na uyakuhlala ngonaphakade esihogweni. Oku kuyingozi kakhulu.
Umchasi bazakufezekisa inkqubo yehlabathi kunye uphawu lwerhamncwa. Akuyi kuba nako ukuthenga okanye ukuthengisa ngaphandle kweli phawu. Ndiyakholelwa kakhulu ukuba uphawu ukuze kulunge chips RFID ebunzini okanye ekunene, okanye umvambo naluphi na uhlobo anokuthi engafuduswayo. Ndiya kholwa kwakhona ukuba iza kutshintsha DNA yakho. Kanye njengokuba ziiNefili, kwaqanjwa zingelosi kunye nabafazi ukusuka kwiGenesis isahluko amathandathu batshintsha DNA zabo. Luphawu lwerhamncwa uya kwenza okufanayo.
IVatican iye ULusifa project / iteleskopu kwi eMount Graham e Arizona apho ingxelo wadibana ubukrelekrele amazwe. They are njengabaphambukeli. Akukho yabasemzini. ukuba baba ziingelosi.
Kwaye ndicinga ukuba kukho imeko eyomeleleyo ichaza isizathu sokuba amakholwa aya kutshabalala kunye njengabaphambukeli kuthiwa iya kubonisa kwaye ucacise ukuba abe okrelekrele owadala okanye izinyanya zethu kunye noMdali kwaye kwafuneka ukususa abo wanyamalala, ke amaKristu okwenyaniso.
Upapa lwangoku, Pope Francis, ukuba umprofeti obuxoki, ngaba ngokwenene ungumhambeli. Ngoko ... Kungekudala noxhwilo uza kwenzeka.
Musa ukulinda. Yamkela uYesu ngoku. Ukuba wenza kwaye silahlekelwe nizikhumbule ukuba mna ukwabelana. Ndiyakuthanda, yaye okubaluleke,
UYesu uyakuthanda wena wafela wena ukuze babe nobomi obungunaphakade. Ukuba ufumanisa ukuba uya kusala ngasemva, thetha ngoko nangoko uYesu. Akuyi kusinda zamasikizi eziya kuza phezu kweli lizwe, okanye ukufa, kodwa uya kudla ilifa ubomi obungunaphakade.
Ukuba ngaba ukwamkela uYesu afe, uyakuhlala ngonaphakade esihogweni. Kwaye ukuba uthatha uphawu lwerhamncwa, u Kukuze ngonaphakade kungekho themba. Uyakuhlala ngonaphakade esihogweni.
Kuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyiNkosi uYesu, wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa.
Kuba ukholo intliziyo nobulungisa; avume ke ngomlomo uya kusindiswa.
Kholelwa kuYesu. Yamkela isipho sakhe mahala zosindiso. Cela nokufumana uYesu ngoku.
"Yesu, ndiyaqonda ukuba mna moni. Ndiyakholwa wena wafela izono zam ndiya makakholiswe nguwe njengomsindisi wam.. Egameni likaYesu, amen."
I cela iintsikelelo zakhe phezu kwenu ukuba bonke bafikelele ekuyazini osindisayo kaYesu.
Ithemba ukuba ukuhlangana kwenu emazulwini.
Uthando e Kristus❣️
Esi email umfundi, ogama izimvo yeyethu yombhali.